Fampielezan-kevitra :: Manabaribary ny famitaham-bahoaka ataon’ireo kandidà ny KMF/CNOE • AoRaha
Fampielezan-kevitra Manabaribary ny famitaham-bahoaka ataon’ireo kandidà ny KMF/CNOE
Ny teo ihany no miverina. Mahatsapa ireo mpikambana eo anivon’ny Komity fanaraha-maso ny fifidianana sy fanabeazana olom-pirenena (Kmf/Cnoe) fa mbola miverina toy ny teo aloha ihany ny fomba fanaovana politika eto amintsika amin’izao fiatrehana ny
Mitohy ny fanabadoana ny Malagasy amin’ny alalan’ ny fividianana vola sy fizarana zavatra ataon’ny ankamaroan’ireo kandidà ho solombavambahoaka manao fampielezan-kevitra amin’izao fotoana izao, raha ny hevitr’izy ireo. “Ho voafitaka indray ny Malagasy”, hoy ny fanambarana navoakan’ny Kmf/Cnoe, omaly.
Na eo aza izany toe-javatra mamohehatra izany, dia tsy mitsahatra manentana an’ireo olom-pirenena hisafidy ny foto-kevitra politika haroson’ireo kandidà ity komity ity. Torohany “ny fisehosehoana sy fampiderana vola fotsiny ihany izay misongadina amin’izao fampielezan-kevitra izao”.
Ady amin’ny kolikoly :: Ho fantara alohan’ny 23 jona izay ho tale jeneraly vaovaon’ny Bianco